Nandrolone Propionate Raw zvinhu Vagadziri & Vanotengesa - Fakita
Nandrolone Propionate powder ndeimwe yevana analiclic-androgenic steroid ine simba inowanikwa mumusika. Inoshandiswa nevatadzi vemiviri nevatambi kuti vanyanya kuwedzera musimba uye simba.
Nandrolone Propionate Raw material (7207-92-3) Tsanangudzo
Nandrolone Propionate Raw material ndeimwe yevakakurumbira steroid injectable. Kuzivikanwa kunogona kunge kwakakonzerwa nekuti Nandrolone Propionate Raw nyaya inoratidza zvakanyanya anabolic nemigumisiro ine madhara uyerogenic madhara. Nandrolone Propionate inhengo inobatsira inobereka hutano hwakanaka, hunogara kwenguva refu hutsika, izvi ndezvikonzero zvehafu yakareba yehupenyu hwemishonga (inenge mazuva 8).
Nandrolone Propionate Raw material inoshandiswa kurwara kusingaperi, kupisa kukuru, mushure mekuvhiyiwa kuporesa kuputika uye kupererwa kwehutachiona, kusati kwasvika uye kutengesa vana, uye nokuda kwekenza dzemazamu dzisingagoneki dzisina kukodzera uterine kubuda ropa uterine fibroids. Nandrolone Propionate Raw nyaya inoratidzwawo mukurapa anemia's, breast carcinoma, angioedema inowanikwa nhaka, antithrombin III inoshaya, fibrinogen yakawandisa, kukura kwekukura uye Turner's syndrome uye prophylaxis ye angioedema inowanikwa nhaka.
Kemikari Name 17-PROPIONATE; NANDROLONE 17-PROPIONATE;4-ESTREN-17BETA-OL-3-ONE 17-PROPIONATE;4-ESTREN-17-BETA-OL-3-ONE PROPIONATE;17-beta-hydroxyestr-4-en-3-one 17-propionate;19-NORTESTOSTERONE 17-PROPIONATE;19-NORTESTOSTERONE PROPIONATE
muchiso Name Anabolicus, Nor-Anabol, Nortesto, Norybol-19, Pondus, Testobolin
Molecular Wsere 330.46
Kunyorera Point 55-60 °
Kubikira pfungwa 453.6 ° C pa 760 mmHg
Biological Half-Life kumativi e8 mazuva
ruvara white crystalline
APane Nandrolone propionate Raw material inoshandiswa kurwara kusingaperi, kupisa kwakanyanya, mushure mekuvhiyiwa kuporesa kuputika uye kuputika kwehutachiona, kusati kwasvika uye kutengesa vana, uyewo nokuda kwekenza dzemazamu dzisingagoneki dzisina kukodzera uterine kubuda ropa uterine fibroids nezvimwewo.
Chii Chinonzi Nandrolone Propionate Raw Material (7207-92-3)?
Nandro Nandrolone Propionate ndechimwe chezivo inoziva vanabolic steroid inoshandiswa nevadziviriri vemuviri nevatambi kuwedzera simba uye simba. Vakawanda vevatambi vanoshandisa steroid iyi kuti vawane masimba akawanda uye simba. Iyi steroid inowanika mune fomu injodzi.
Iko a19-kana anabolic androgenic. Yakashandurwa zvishoma kuti inounze kuchinja kwe testosterone maitiro. Mune mamwe mazwi, ndeimwe yezviwanikwa zve testosterone nevana analiclic effect asi zvishoma nezvishoma uyerogenic rating. Iyo ndiyo yakashandiswa zvikuru sezvo steroid iyi inoderedza DHN apo imwe steroid inoderedza DTH.
Nandrolone Propionate Raw material (7207-92-3) inoshanda
Nandrolone Propionate Raw material (7207-92-3) yaifungidzirwa nevakawanda zvakanakisisa steroid kuti murume ashandise Nandro (Nandrolone Propionate Raw material) inowanzojaiwa kane kana katanhatu pavhiki. Nechiyero ichi, estrogen kutendeuka ishoma saka gyno haina dambudziko. Nekuvaka muviri, Nandro (Nandrolone Propionate Raw material) anogona kunyatsogadziriswa mumasendi maviri uye kucheka. Zviri nyore pachiropa uye zvinokurudzira hukuru hwakanaka uye hunosimba simba apo unoderedza mafuta emuviri.
Nandrolone Propionate inowanikwa mune fomu injodzi. Ndicho chikonzero zvinotora nguva shomanana kuti uwedzere kusanganiswa uye uite basa. Zvinotora pamusoro pe2 kusvika kumavhiki e3 kuti aone. Saka zvinorayirwa kurega kutungamirira Nandrolone Propionate twoto masvondo matatu vasati vambosangana nemakwikwi kana mutsara apo kuongororwa kwechirwere kunogona kuitika. Sezvinoenderana nekurapa kunoda kwaive kushandiswa se 100 kusvika 200mg kwevhiki kuitira kugadzirisa chirwere chekushaya ropa nekumwe zvirwere. Vamwe vatambi vanoshandisa kunyange nezve 300 kusvika ku400mg vhiki yega yega kubudirira.
Nandrolone Propionate Raw mativi (7207-92-3) Pudder Uses
Nandrolone Propionate inoshandiswa nemuti-vavaki nevatambi kuwedzera simba uye simba. Inoratidzwawo pakurapa kweanemia's, breast carcinoma, angioedema yenhaka, antithrombin III inoshaya, fibrinogen kudarika, kukundikana kwekukura uye Turner's syndrome uye prophylaxis ye angioedema inowanikwa nhaka.
Tenga Nandrolone Propionate Raw material (7207-92-3) kubva kuBuasas.com
1 Kudzokorora nokuti Nandrolone Propionate Raw material (7207-92-3)
Chigadzirwa NANDROLONE PROPIONATE chinobatsira zvikuru.